I edume basketball Redzhi Miller, ogama biography ligcwele izindaba nangombango, emacaleni lapho kuba esibalulekile ukulondolozwa iqembu, futhi imiphumela zaba okulindele, izikhathi eziyisihlanu, yaba ilungu zonke-inkanyezi ithimba seqembu kubhekwa scorer engcono emlandweni NBA.
Reggie - American basketball inkanyezi of the 90s, wachitha yakhe eneminyaka engu-18 umsebenzi, yena wadlala ngo "ithimba Indiana Pacers 'futhi, nanyana gade angakghoni uwine NBA ubuqhawe, isibe eziphilayo legend kweqiniso.
Miller wazalelwa Agasti 24, 1965 ku Riverside, California, lapho akhulela khona emkhayeni wamasosha udadewabo Cheryl (zonke izingane ayemahlanu), kamuva elaba kwezemidlalo intatheli ye-ESPN futhi Star WNBA.
Bazalwa uhlobo hip, ingane Reggie wasebenza kanzima ukuze bafunde ukuhamba kahle. Kamuva, waqala ukugqoka imilenze yomibili besokunxele. Ngokusetshenziswa lezi amadivaysi nemilenze kwaqinisa ngokwanele ukuze uvale isikhala ukusonteka, futhi Reggie kungakabiphi ukujoyina nabekhabo, ehlanganisa asebenzayo ezemidlalo abathanda. Wayengumuntu umdlali we wami omdala wasesikoleni, okuyinto ukuqeqeshwa kakhulu kangangokuba ekuqaleni ngobuthaka bakhe professional umsebenzi yaphenduka emandla.
Reggie wafunda umlando e-University of California eLos Angeles, futhi ngonyaka wakhe wokugcina esikoleni alethwe iqembu inyuvesi, "Bruins" yanqoba ubuqhawe we Conference Pac-10.
Ucije amakhono umdlalo basketball Miller wenza umbango obabayo udadewabo Cheryl, kamuva owaba abadumile ngokuhlasela e-WNBA.
In biography yakhe esemthethweni, incwadi ebizwa ngokuthi "Ngiyakuthanda ukuba isitha," Redzhi Miller ukhumbula indlela okunzima ayesebenzela ukunqoba udadewabo. Rumour has it ukuthi isitayela elingavamile kokwenza imiphumela yesikhathi eside ezayo isibhamu athuthukile uma Reggie wagijima ungene ibhola elikhulu ezweni Sheryl, owazama ngikukhiphe.
Ngonyaka wokuqala ngo-NBA Miller waphula irekhodi oneminyaka eyisishiyagalombili ye Larri Borda ngenani izikhombo, bashiya Rookie isizini. Ngokushesha eyaduma njengomuntu ukwazi ukulondoloza iqembu kule izikhundla nzima kakhulu. Ithimba lakhe wadlala ngokumelene "Bulls Chicago" e-Eastern Conference Championship e ngonyaka ka-1998, wathatha ingxenye in the game futhi Redzhi Miller. Izikhathi ezingcono kakhulu umdlalo isikhathi eside izogcinwa encwadini yezindaba zemihla ngemihla NBA. Ngaleso sikhathi, Reggie wabanjwa ibhola ngisuka sideline amasekhondi ezintathu ngaphambi kokuphela, futhi wenza sniper shot eside, okwenza ukuba iqembu lakhe ukuze anqobe.
Feat edume kakhulu ukuthi wenza Redzhi Miller - 8 amaphuzu e 9 imizuzwana, yena won 1995 emdlalweni ngokumelene "Knicks New York", ukunciphisa igebe amaphuzu ayisithupha, futhi ngokoqobo wahlwitha anqobe kusuka abaphikisi. Ngisho nalapho umsebenzi likaMiller aqala ukuncipha, it namanje kubhekwa ikhono lomuntu ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi umdlalo isimo eziyinkimbinkimbi kakhulu, futhi wahlala umholi ithimba endleleni ukuze siwuphumelele.
Ubuhlobo likaMiller ne "Indiana Pacers" kungaba uyibize ngokuthi evamile: umlando NBA abantu ababili kuphela iqembu elifanayo kudlalwa imidlalo okungaphezu kwalokho yona ekwaziyo. Ngo-1987, lapho Reggie wamenywa ethimbeni, abalandeli bebengeneme ukukhetha saqala booed. Nokho, ngokushesha wazibonakalisa kuwufanele yayo futhi wathola a lot of abalandeli hhayi kuphela e-Indianapolis, kodwa ezweni lonke.
Ukugcwaliswa amathuba okuba umculi okhokhelwayo
Reggie ashiya izikhundla ngo-2005, ukuba irekhodi ukuze iningi enamaphuzu amathathu isibhamu emsebenzini wakhe (2560). Umxhwele kanye neqiniso lokuthi bonke abaneminyaka engu-18 umsebenzi wakhe lochwepheshe ayihlala "ithimba Indiana Pacers '. Miller uyaqhubeka ukuze kungene isikhundla yesibili kulesi sigaba.
Lapho Reggie omemezele ukuthi uyasula esikhundleni sakhe, enkundleni 'Conseco Fieldhouse "wamnika emkhosini angu-45 nemoto entsha. Miller, kuwufanele kabani net ayizigidi ezingu-90 US dollars, njengamanje usebenzela esiteshini TNT njengoba umhlaziyi NBA imidlalo, endaweni efanayo lapho udadewabo Cheryl. Usalokhu ichitha isikhathi esiningi isikhathi sakhe Indiana, lapho ngo-2005, wayeba njengompristi zaziziningi mbukiso elalinikezelwe uhlanga imoto "Indianapolis 500".
Redzhi Miller kuyinto yaseMelika Afrika Uzalo ukukhula 201 cm, bokuthi okuyinto - ikhanda Athletic futhi Bald. Ngemva kokuhlola izithombe zakamuva, singaphetha ngokuthi wayengekho isesimeni esihle ezifana ubengaphakathi ukuphakama umsebenzi wakhe wezemidlalo. Ubukeka abe stouter kancane.
Ngokuphathelene isimo somshado, Miller okwamanje ukujola nentombi yakhe, okuyinto mhlawumbe unina wendodana yakhe Riker, ubani Reggie ukudlala i-basketball namuhla.
Kusukela ngo-1992 kuya ku-2001, Reggie wayeshade Marita Stavrou, imodeli nomlingisikazi, ayehlangana nabo ngokusebenzisa Magic Johnson.
isehlukaniso yabo kusolakala ukuthi kwenzeka ngenxa yokuthi Reggie belulekwa umkakhe abe uyinkosikazi, nakuba yena nanifuna ukukufinyelela okuthile ekuphileni. Ngokolwazi emithonjeni enokwethenjelwa, ngemva kwesehlukaniso, Marita wathola $ 5 million ngo ukondla obushade naye emuva kwesehlukaniso nangaphansi imigomo yenkontileka umshado. Kodwa ngemva kwesikhathi esithile Marita sekugcwalisiwe Reggie enkantolo, ethi ku inqubo yesehlukaniso, waqamba amanga wathi inani langempela inhloko-dolobha yabo, futhi wavumelana lenkokhelo ayilungile. Uthe Reggie ekuhumusheni izindodla nabangani bakho akhawunti ukufihla bengabangane bengcebo yabo. Kamuva, sekukhishwe isinqumo enkantolo.
Kokunye ngempelasonto ngo-August 2009 kwaba khona omunye ukungqubuzana lapho phezu emabhishi Southern California has a banner okudweba nombhalo othi: ". Redzhi Miller, ayeke nokujaha owesifazane oshadile" Kubikwa ukuthi kwaba nesibopho Alex intombazane ethile ajwayelekile okuthiwa Ali Kay. Kukhona ulwazi Ali kanye Reggie wokuqala ahlangana naye ephathini, futhi okwesibili ngemuva kwesikhathi esithile ku esitolo. Ukuza aphume esitolo, Reggie kusolakala babeqhubeka befuna kuye. Kamuva, kusolakala ukuthi umsolwa wabe wayithumelela umlayezo wombhalo 53 amahora amane.
Iqiniso lokuthi Ali kwaba umakhelwane Kay Miller nomkhwenyana Alex von Fyurstenburga. Kuthiwa Alex etholakele Reggie izinsongo zokufa, lona wamuva wathembisa umeme abangani ephethe isibhamu, uma ungenawo ayeke imibuzo mayelana Ali. Noma kunjalo, amaqembu wafika isivumelwano futhi kunjalo yavalwa emva ukuxolisa.
Reggie wayesichazelile kakade umbono wakhe ngxabano Ali. Wahlangana Ali kwelinye Malibu esitolo waqala ukuloba umyalezo nomyeni wakhe, futhi, nakhu ayekubhalile kuye. Ali yena wavuma ukuthi ngenjongo wathumela isithombe ezimbili inkanuko, umamukeli okwakunzima Redzhi Miller. Izithombe wathumela Miller intombazane, futhi akazange avele enkantolo ngoba icala yavalwa.
Biography Redzhi Millera ngeke ibe ephelele ngaphandle indaba ngendlela ezimbi ukufunga on inkantolo. Miller ngokuvamile washeshe wahileleka ukuthi abanye abadlali abathintekayo engxabanweni ngamazwi ukuthi zigcine olungcolile lobuchwepheshe noma ukususwa. Kungaba uthando noma inzondo, kodwa musa ukuyiziba ke. Ngesikhathi lo mdlalo wayehlale kudlalwa umbukiso, ukuvula izimpi ngamazwi abanolaka and ukubonisa sokuziphakamisa kwabo nasemizweni yokuthatheka.
Kuyiqiniso futhi ukuthi ingenye abasubathi zidla kakhulu waso sonke isikhathi. Phela, ngesikhathi kushayisana wayehlale ephethwe ukuze ajezise amalungu amanye amaqembu (ikakhulu "Knicks New York"). Omunye izidlaliso bakhe - "Nick-killer" - UReggie bekungenxa yokuhluleka ukuthobela umbango abanolaka phakathi kwalamaqembu, "Nix" futhi "Pacers" ochungechungeni playoff 1990.
Lokhu umbango usephendukele Njengoba iminyaka idlula, futhi namuhla, phezu fan kwaziwayo "Knicks" Spike Lee uthanda ukuba bahlekise ngayo Redzhi Miller. Ukuthayipha owenza umlando kwaba lapho Reggie ihlanganisa entanyeni yakhe izingalo okubonisa umoya uma umuntu ayedlala Ufaka isigwebo ezibucayi.